Ngubani u-Oprah Winfrey? Ubomi obufutshane
Ngomxholo weNgcaciso Yombonakalo Show Host
U-Oprah Winfrey wazalwa ngoJanuwari 29, 1954, eKosciusko, Miss., KuVernita Lee, umgcini wendlu, noVernon Winfrey, ijoni. Wazalelwa uOrpa uGail Winfrey, kodwa ukugqitywa kwezinto ezingafaniyo kunye nokuphosa kwakhe kwagqitywa kwaye uOrpa waba Oprah.
Ukukhula kunye ne-Oprah
U-Oprah wasebenzisa ubuncinane bakhe ubunzima bokungaqhelekanga: ukuphumelela kwezemfundo kunye nobomi bendlu engasebenzi. Wahlala kunye nogogo de wayeneminyaka emithandathu, kwaye, ngelo xesha, wafunda ukufunda.
Emva koko wathuthela eMilwaukee nonina. Aba babini bahlala ndawonye beswele. Unina wayengamxhaseli ukukhula kwakhe kwengqondo, kwaye wayenyamezela ukuphathwa kakubi ngokomzimba ngezihlobo. Phakathi kwayo yonke into, wehla amabanga amabini kwaye wanikezelwa ukufundiswa kweemali kwi-13 yobudala.
Kungekudala emva koko, unina wathumela u-Oprah kuyise e-Nashville. UVernon wenza imfundo ibe yinto ephambili kwaye wanyusa i-Oprah ukuba iphumelele. Waba ngumfundi ohloniphayo, wazuza i-scholarship epheleleyo kwiYunivesithi yeSizwe yaseTennessee, waza wathweswa uKore Black Tennessee ngo-18 ubudala.
Ngokukhawuleza ekubeni waba ngumfundi kwi-State Tennessee, ihobe lase-Oprah kwiimidiya zokusasaza, esebenza kwisikhululo senomathotholo saseNashville. Ngokukhawuleza wathuthela kumabonwakude, waba ngumbonakaliso wezona zinto ezincinane kunazo zonke kunye neAnchor yokuqala yase-Afrika kwi-WTVF yeNashville.
I-Oprah yokuqala yokuqala njengomdlalo wokubonisa intetho weza emva kokufudukela eBaltimore, Md., Apho wajoyina iqela leendaba kwi-WJZ.
Ngokukhawuleza wabanjwa ukuze ahlangane nomboniso wendawo "Abantu Bathetha." Le yayiyindlela yakhe yokuqala ukuya kwizinto ezininzi, ezininzi, izinto ezinkulu.
Ukuba yi-Host Show Show
I-oprah isinyathelo esilandelayo somsebenzi esamthatha esivela kumanxweme aseAtlantic ukuya kumanxweme aseLake Michigan. Wafika e-Chicago, kwi-WLS, ethatha umboniso osasazantsi we-"AM Chicago." Isimboso sakhe, ubuntu, kunye nokukwazi ukuthetha nabantu malunga nemicimbi yangempela ithumele umboniso omncinci wokugqibela kwindawo yokuqala kwiinyanga ezili-12.
Kwiminyaka emibini engaphezu kweminyaka emibili - phakathi kohlobo lwayo ngoJanuwari 1984 noSeptemba 1986-u-Oprah ukhokela inkqubo kwi-syndication yesizwe, ngokugqithisela ngokugqithiseleyo "iDonahue".
Emva kokungena kwi-syndication ngo-1986, i-Oprah yabonisa ngokukhawuleza yaba nguNombolo 1 kwisiqhelo ngokuqhelekileyo esilawulwa ngamadoda amhlophe. Wayekhenkcelela ifomati "yeTransk" ifomenti, inene, kunye nesitayela esineenkcukacha ngokuthe tye kwi-90s, ngokubonakalayo ibonisa ukuphela kwefad. Kamva, waqulunqa isiseko sekhefu ephumelelayo i-Oxygen kunye ne-OWN, i-Oprah Winfrey Network.
I-Oprah ngumvelisi, umshicileli, ugxeki wencwadi, umdlali, kunye nodumo lwamazwe ngamazwe. Nguye, mhlawumbi, uphawu olusasazwayo lweendaba-olubonakala lujika kwigolide nantoni na ayifanelekileyo ukuyichukumisa. Kunzima ukucinga ukuba umsebenzi wakhe unokukhula kakhulu kunokuba. Kodwa kunye nabalandeli bekhalaza ukuba bamtyundele uMvuzo weNobel woMongameli kunye nomongameli wezomongameli, ngokuqinisekileyo, isibhakabhaka sinomda.
Ngaphezulu kwayo yonke into, i-Oprah ihleli phantsi komhlaba kwaye kulula ukuthetha nomfazi. Kwaye, ngokwenene, yintoni eyenze ukuba uphumelele.
Igama le-oprah yenkampani yokuvelisa, i-Harpo Productions, "yi-Oprah" ibhalwe ngasemva.
I-Oprah yafumana i-Award Academy Award yokumisela inxaxheba yakhe kuSteven Spielberg's The Color Purple.
Emva koko uza kuvelisa inguqulo yefilimu kwi-Broadway.
I-Oprah ipapasha amaphephancwadi amabini, O, Umagazini we-Oprah no-O ekhaya. Iphepha le-Fortune elithi O, i-Oprah Magazine eyona nto ipapashwe ngokutsha ngempumelelo kwimbali.
Ngonyaka wokuqala we-2004, u-Oprah wanika iimoto ezintsha kubo bonke abaphulaphuli bakhe.
I-Oprah yizwi likaGussy le Goose ngo-2006 ngokulungelelaniswa "kwiWebhu yeCharlotte."
Wayekhe wachaza umgxeka uRoger Ebert .
UWinfrey udweliswe ngu-Forbes International njengowomhlaba we-Afrika waseMerika kuphela.
I-Oprah inikela ngokubanzi kwizothando kunanoma yimuphi umboniso wezorhwebo. Uluhlu njengowama-America angama-235 awona mkhulu kakhulu (ngo-2005), wayeyindoda engama-32.
Ukususela ekuqaleni "Iqela leNcwadi ye-Oprah," uluntu oluthile lweencwadi zethelevishini lunamandla kangangokuba nayiphi na incwadi ebhalwe kwi-list-reading read becomes the best seller. (Emva kokufumanisa ukuba umbhali uJames Frey "Million Pieces Little" wayenamanga, u-Oprah wamthuka umlobi kwiprogram yakhe, ngokukwenkcenkcesha ukukhankanya i-"Club Club". .)
I-Gray's Anatomy Isikhathi 2: Ngubani, Yintoni na njani
Abashumi aba-10 abaphezulu kwi-Alpine Skiing
Imbali yokukhipha isisu: Ingxabano e-US
I-Cancer ne-Virgo: Uthando lwabo luhambelana
Umlinganiselo wexesha elilawulayo